Waxaan horeyba uga dhexjirnay ROSA Linux Marathon 2012 Final | Laga soo bilaabo Linux
Tan iyo shalay, ogeysiiska rasmiga ah (oo af Ruush ah) wuxuu u muuqday meeshii ay ku soo warrameen helitaanka nooca ugu dambeeya ee qaybintaan ballaaran, halkan waa qayb ka mid ah bayaanka la yiri:
Shirkadda ROSA waxay ku faraxsan tahay inay soo sheegto inay soo gabagabeysay shaqadii ROSA Marathon 2012 ee nidaamka qalliinka (qeybinta Linux oo leh taageero la gaarsiiyay 5 sano, badanaa diirada lagu saaray macaamiisha ganacsiga).
Waa hagaag, tani waxay ka dhigan tahay in ujeedada ugu weyn ee loo yaqaan 'distro' ay tahay xasillooni iyo wax soo saar, waxay u noqon laheyd wax la mid ah nooc Debian Stable ah, laakiin kuwa quudhsadayaasha ah ee jecel adrenaline-ka iyo kuwa ku dhaca xanuunka loo yaqaan 'versionitis' (sida aniga oo kale XD), RosaLabs anaga ayaa leh wax lala yaabo :
Iyadoo la bilaabayo ROSA Marathon 2012, diiradda ugu weyn ee shirkaddu waxay u wareegi doontaa diyaarinta nidaam cusub oo shaqeynaya Desktop ROSA 2012, kaas oo loo qorsheeyay in la sii daayo dhamaadka sanadka. Marka loo barbardhigo Marathon, nooca Desktop wuxuu diirada saari doonaa ugu horeyn dadka isticmaala desktop, raadinta muuqaalada jarista, fursadaha habeynta nidaamka ee balaaran, iyo noocyo badan oo codsiyo ah.
Haddii qof doonayo inuu wax badan ka ogaado qaybinta this wuu akhrin karaa tan maqaal. RosaLinux, wuxuu leeyahay 2 nooc, the BILAASH waxaa ka mid ah oo keliya Software Free iyo EE waxaa ka mid ah softiweer gaar ah (Ka Baxsan Sanduuqa).
source: RosaLabs Rasmi Blog
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Waxaan horey u haysannay ROSA Linux Marathon 2012 Final naga mid ah
Saaxiib Perseus, adigu waxaad tahay tijaabiyaha dhammaan dhibaatooyinka la daabacay, waxaa macquul ah inaad horeyba u rakibtay Rosa, sidaa darteed waxaan sugeynaa faallooyinkaaga khabiirka ah.
Xaqiiqdii, waxaan ballanqaadayaa inaan dib-u-fiiriyo tan weyn ee durugsan shortly waana ku mahadsan yahay ammaanta XDDD
Bal eega dijo
Waad salaaman tahay, waxaan rakibay qaybinta oo dareenkuna waa mid aad u wanaagsan. Laakiin shaki ayaan qabaa… .Waxaan rakibay darawallada nvidia ee ka socda maareeyaha xirmada, dib ayaan u bilaabay nidaamka markii aan bilaabayo dookha nvidia wuxuu oranayaa waa inaan ku bilaabaa amarka «nvidia-xconfig». Waxaan bilaabayaa amarka markaan dib u bilaabo waxay ku jirtaa qaabka qoraalka. Qof baa i caawin kara?. Aad baad ugu mahadsantahay horay, salaan.
Waxay u badan tahay, inaad seegtay rakibidda ku tiirsanaanta dheeraadka ah, laakiin waxaan maraynaa tallaabooyin, marka aad bilowdo nidaamkaaga oo aad gasho qaabka qoraalka, ku qor:
Sida isticmaale caadi ah, haddii aad hesho fariin qalad ah, dhaji, haddii aad bilowdo jawiga garaafka ah ee ay ka digeyso oo aan aragno sida loo xalliyo labada xaaladoodba;).
Waan ilaaway, waxaad u isticmaali kartaa kulankeena inaad ku soo bandhigto shakigaaga, dhibaatooyinkaaga iwm.
Waxay qabataa indhahayga, laakiin waxaan u maleynayaa inaysan sifiican uga shaqeyn doonin netkeyga
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada. Hagaag, sidoo kale waxaan isku dayay inaan ku bilaabo bilowga oo khilaafku wuu sii muuqdaa, wuxuu ii sheegayaa in wixii macluumaad dheeri ah la tasho /var/log/Xorg.0.log iyo raadinta waxaan arkaa isku dhaca soo socda: [11655.878] (EE) Fashilmay bilaabid kordhinta GLX (Darawalka NVIDIA X ee ku habboon lama helin). Mahadsanid
- dib u rakib darawalka
- tirtir xorg.conf ama dib u dhig oo abuur mid cusub
Haa, waxay muujineysaa in darawalka aan si sax ah loo rakibin. Si loo abuuro fayl cusub oo Xorg ah:
nuqul ama u wareeji faylka cusub xorg.conf.new / / etc / X11:
tan waxaad awoodi doontaa inaad mar kale ku soo gasho jawiga garaafka, mar dambe ayaad rakibi kartaa darawalka nvidia markale, nasiib wacan;).
Waxba, majirto wado lagu maamulo darawalka lahaanshaha Nvidia. Waxaan horeyba ugu yaraan ugu guuleystey inaan kujiro qaab guud. Ku soo noqoshada si aan dib ugu rakibo darawalada, waxaan arkaa inay ku dareen faallo akhrin ah waa inaad ku muujisaa arjiga XFdrake, waxaan raacayaa talaabooyinkooda mar walbana waxay calaamadeysaa Intel 810 iyo mar dambe, waxaan isku dayaa inaan u bedelo darawalka GeForce 400 taxane iyo latery Waxaan u maleynayaa qaladka «(EE) Ma jiro qalab la ogaaday. '. Waxaan u kuur galey in GF108 (GeForce GT 540M) iyo Generation 2nd Processor Core Processor Family Integrated Graphics Controller ay ku ogaadaan kaararka maareeyaha qalabka. Runta ayaa ah inaanan sii aqoon waxa aan sameeyo ... Mahadsanid
Waad salaaman tihiin, waxaan aad ugula talinayaa inaad dhibaatadaada ku soo bandhigtid madashayada, maaddaama ay caadi ahaan tahay meesha ugu habboon ee tan lagu sameeyo, halkaas waxaan ku haysannaa dad badan oo ku siin kara fiilo aad ku xalliso @Annubis Tababaraha kooxda mandriva XD) :).
Nota: Waqtigan xaadirka ah golahayagu wuxuu leeyahay dhibaatooyin :(, waxaan rajeyneynaa in dhibaatadani aysan sii socon doonin muddo dheer;).
Mahadsanid waana ka xumahay, xaqiiqdii halkaas ayaan ku dhajin lahaa, laakiin sidaan u arkay inay hoos u dhacday ma aanan sameyn. 🙂
Daqiiqado yar uun ka hor madashu waa onlayn 😀
Distro aad u wanaagsan, oo leh Klook iyo KDE way buuxaan, waad ku mahadsantahay wararka
Ku jawaab hackloper775
Waxaan rabaa inaan haysto kaydinta qaybinta tan iyo markii aanan heli karin amsn, kmess iyo waxyaabo la mid ah, iyo kuwa ku yimaadda qaab-dhismeedku waxay helayaan xirmo yar
Warka Mandriva. Waxaan ka aqriyay wararka Drake in Mandriva na keenayo war cusub mustaqbalkaaga.
Cajiib. Runtu waxay tahay, waxaan dareemayaa inay ahayd ROSA igu kaliftay inaan jeclaado Mandriva 2011, aad ayay uxun tahay kani waqtigiisuu ku egyahay (cusbooneysiinta). Waxaa laga yaabaa inay tahay fikradayda, laakiin waxaan u maleynayaa in Mandriva uu dib ugu laaban karo maalmaha ammaanta, haddii ay fiiro gaar ah u yeeshaan noocyada barnaamijyada.
Jawaab Gustavo Castro
Waad ku saxan tahay noocyada barnaamijyada, waa inaan sugno Rosa Desktop 2012, laakiin distro-kani wuxuu ku jiraa, ra'yigayga hoose, midka ugu fiican wax soo saarka iyo bay'adaha ganacsiga.
hello waar su'aal tani waxay ku saleysan tahay maxaa distro ah, waxaan u maleynayaa inay ku qoran tahay debian ma aqaano ????
Waxay ku saleysan tahay Mandriva 2011 😉
marco matthew dijo
I caawi. Waxaan hadda rakibay kor u kaca 2012, laakiin waxaan dhibaato ku qabaa xakamaynta wireless, kama dhigi karo inay shaqeyso, fiilooyin haddii aad jiido, fadlan caawi.
laptop kombiyuutarka dv2000 laptop,
Ku jawaab marco mateo
Waxaan kuugu hambalyeynayaa bartaada. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay suurtagal tahay in Rosa lagu rakibo Ubuntu iyo Windows 7. Salaan
Jawaab ku bixi Marco Antonio
Haa, waa suurtagal, waana mid aad u fudud mahadsanid rakibayaasha Rosa.
Inkasta oo waqtigan aad horay u rakibtay waqti dheer kahor .. XDD
Ku jawaab Rene Lopez
Xfce 4.10 hadda waxaa lagu rakibi karaa Xubuntu oo laga helayaa rasmiga rasmiga ee PPA